सोमबार ४ चैत, २०७५
जनबोली जनताको बोली प्रवाह गर्ने माध्यम बन्न चाहान्छ । यसैले हामीले आजदेखि जनताको सरकार खोज्ने अभियान शुरु गरेका छौ । गाँउ–गाँउको सिंहदरबार के गर्दैछ । खोजी गर्ने र जनताको बोली गाउँदेखि संघसम्मको सिंहदरबारमा पुर्याउने बोलीको सम्वाहक बन्ने लक्ष्यका साथ आजबाट जनबोली डटकम डिजिटल पत्रिकामा हाम्रो सरकार कोलम शुरु भएको छ । हामीले यो कोलममा हरेक दिन यही समय हाम्रो सरकारका विशेष सामाग्री प्रस्तुत गर्नेछौ । हाम्रो सरकारको पहिलो सामाग्रीमा हामीले पूर्वी जिल्ला खोटाङ्गको पहिलेको सदरमुकाम रहेको दिक्तेल सहित बनेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाङ्गका, नगर प्रमुख (मेयर) दिपनारायण रिजालसँग विशेष कुराकानी गरेका छौ । मेयर रिजालसँग बीर बहादुर वलीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
गाउँ–गाउँमा सिहंदरबारको सेवा प्रवाह कस्तो हुँदैछ ?
खासगरी जब–जब स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आयो । ऐन कानून निर्माणमा विषेश ध्यान दिइएको छ । पहिले केन्द्र वा प्रदेशमा गएर गर्नुपर्ने कामलाई अहिले वडाबाट नै गरिने वातारण निर्माण भएको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अर्थ जनतालाई सास्ती नहुनु हो । हामीले पनि त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । नेपालको भौतिक संरचनाको हिसाबले पनि सानो–सानो कामको लागि सिंहदरबार अर्थात मुख्य प्रशासनीक केन्द्र धाउँनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । स्थानीय सरकारले ऐन निर्माणका कामहरु सम्पन्न गरेको छ । अब यसको कार्यान्वयमा रहेको छ । मलाई लाग्छ हामी यस कुरामा स्पष्ट रुपमा लागेका छौ ।
जनतामा कत्तिको सन्तुष्टि देख्नु भएको छ ?
पक्कै पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक २० वर्ष पछि नेपालमा यसरी पहिलो निर्वाचन भयो । स्थानीय निर्वाचनपछि जनतामा अहिले मैले ठुलो आशा देखेको छु । मैले यहाँ धेरै विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न गरेको छु । जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । तर, अर्को सत्य के हो भने कुनै पनि समाज पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुन सक्दैन । मैले मेरो तर्फबाट हुनसक्ने सम्पुर्ण प्रयासहरु गरेको छु । हाम्रो नगरपालिकालाई देशकै नमुना बनाउँनको लागि म लागि परेको हुँदा यहाँ जनतामा पनि त्यति धेरै निराशा देखिएको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँ जनतामा मैले सन्तुष्टि नैं देखेको छु । यसैले म पनि खुशी छु ।
तपाई आफुले गरेको कामलाई १०० नम्बरमा आफै कति अंक दिन सक्नुहुन्छ ?
यो अलिक गाह्रो प्रश्न हो । आफैले आफैंलाई एक समय नम्बर दिन त नमिल्ला । तर मैले यस क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो तर्फबाट सय प्रतिशत नै लागेर काम गरेको छु । हामी देशको पहिलो विकास निर्माणका कामहरु तय गर्ने नगरपालिकाको रुपमा रहेका छौ । म पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएको हुँ, यसकारण मैले पाँच वर्षसम्म गर्ने योजना तयार पारेको छु । म तपाईलाई के भन्छु भने मैले मेरो कार्यकालमा आफुले भनेका सबै कामहरु पुरा गर्न सक्छु । अहिलेलाई म मेरो कामलाई एक सय प्रतिशतमा तीस देखि चालीस प्रतिशत दिन चाहान्छु । मैले अहिले धेरै काम गरेको छु र बाँकि कामहरुको खाका तयार गर्दैछु । मेरो बाँकी कार्यकालमा एक सय प्रतिशत काम गरेर मतदाताको मन जित्ने गरी नै काम गर्ने मेरो प्रतिज्ञा छ ।
स्थानीय तहमा सोचेजस्तो काम गर्न कस्ता अप्ठ्याराहरु छन् ?
देश संघीयतामा गए पछि यहाँ मात्रै होईन देश भरि नै कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या रहेको छ । हाम्रो नगरपालिकाले पनि कर्मचारी सम्बन्धिको समस्या भोग्नु परेको छ । हाम्रोमा विशेष गरेर प्राविधिक कर्मचारीहरुको अभाव रहेको मैले पाएको छु । अर्को कुरा नेपालमा अहिले अपनाइएको संघीयता विश्वमा नयाँ मोडलको संघीयता हो । विश्वका २९ देशहरुमा भएको संघीयताको बारेमा अध्ययन गर्न चाहानेहरुले नेपालबाट धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ ।
नेपालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नै कार्यपालिका, न्यायपालिका हरेक तह र तप्काको निर्माण गरिएको छ । संविधानमा यसरी लेखिएको भए पनि संघीयता कार्यान्वय गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । माथिल्लो स्थानीय निकायहरुमा दबाब सिर्जना हुने खालका समस्याहरु रहेको मैले पाएको छु । तपाईलाई उदाहरणका लागि कुनै वडामा गर्न सकिने कामको सम्झौता गर्नका लागि केन्द्र वा प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । मैले यति भन्न चाहेको हुँ संविधाअनुसार कतिपय अवस्थामा स्थानीय निकायलाई चल्न दिइएको छैन ।
स्थानीय तह कतिसम्म अधिकार सम्पन्न भएको महसुस गर्नु भएको छ ?
संविधान अनुसार स्थानीय निकायलाई दिइएको अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको छैन । सानो–सानो कुराहरुमा पनि केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकारबाट हस्तक्षत हुने गरेको छ । नगरपालिका आफैंले सम्पन्न गर्न सक्ने कामका लागि कहिले संघको सिंहदरबार त कहिले प्रदेशको मुख्य प्रशासनीक केन्द्र नै जानुपर्ने बाध्यता अझै छ । यो वास्तवमा एक दुःखद कुरा हो । स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ, तर अहिले हाम्रोमा कतिपय अवस्थामा हस्तक्षप भएको महसुस हुन्छ । मैले यसमा भन्न खाजेको कुरा के हो भने संविधानमा अधिकार दिइएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कहिलेकाही बल प्रयोग गरिएको छ । मुठ्ठी फुकाएर संविधानमा भएजति अधिकार स्थानीयलाई दिन कन्जुस्याई गरिएको छ ।
अहिलेसम्मको कार्यकालमा आफुले महत्वपूर्ण मान्नु भएका प्रमुख ५ कामहरु उल्लेख गर्नुपर्दा ?
मैले पहिले पनि भने हाम्रो दिक्तेल रुपाकोट मझुवागडी नगरपालिका नेपालमा पहिलो आवाधिक योजना निर्माण गर्ने नगरपालिका हो । अनि अर्को मैले पर्यटन विकासका लागि हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतहरुको प्रवृद्धनसँगैं पुनःनिर्माण गरिएको छु । जस्तै जतिपनि भक्तजनहरु हलेसी दर्शन गर्न आउँनुहुन्छ, उहाँहरु एक पटक कालिका भगवतीमा आएर दर्शन गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ ।
विभिन्न धार्मिक विश्वासका आधारमा हेर्ने हो भने जो व्यक्ति हलेसी दर्शन गर्छ उसले कालिका भगवतीको पनि दर्शन गर्नुपर्छ । हामीले यसका लागि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि सडक सञ्जाल लगायतका अन्य कुराहरुको विकास गरिरहेका छौं । मौरे मा आँखा पोखरी, रुपाकोटमा भ्यू टावर, भुलभुले पोखरी, विश्वको सबैभन्दा अग्लो एलम्बर पार्क निर्माण गर्ने तयारी थालिएको छ । तेस्रो सबै वडाहरुमा लगातार सडक संचालनका लागि कामहरु भइरहेको छ ।
अहिले सडक सञ्जाल पुगेका वडाहरुका वर्षायाममा समस्या हुने गर्दछ, त्यसको न्युनिकरण गर्नको लागि काम थालिएको छ । चौथो, दिक्तेल बजारको फोहोर व्यवस्थापन गरेका छौ । फोहोर व्यवस्थान सभ्य समाजमा चुनौतीका रुपमा रहेको छ । हामीले यो चुनौतिलाई पार गर्न सफल भएका छौं । र अन्त्यमा मैले कृषि क्षेत्रको लागि विशेष पहल गरेको छु । हरेक वडामा कृषि केन्द्र निर्माण गरेर यहाँको उत्पादनलाई निर्यातको अवस्थासम्म पुर्याउनको लागि काम थालेको छु ।
नगरवासीलाई तपाईको सन्देश केही छ ?
म मेरा नगरवासी दाजुभाई दिदीबहिनीलाई सम्मान गर्न चाहान्छु । समग्र नगरको विकासका लागि सबैलाई सहयोग गर्नको लागि अपिल गर्न चाहान्छु । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने आफ्नो वडाहरुमा आएको कामको बारेमा चासो राख्नु पर्छ । कति बजेट आएको हो कसरी काम भइरहेको छ जस्ता सार्वजनिक चासोको विषयहरुमा निर्णायकको भूमिकामा रहन अनुरोध गर्दछु । म सबैलाई अपिल गर्न चाहान्छु, आउँनुहोस सबै मिलेर हाम्रो नगरपालिकालाई नेपालको नमुना नगरपालिकाको रुपमा स्थापित गरौ । अन्त्यमा म भन्न चाहान्छु संविधानले दिएको सबै अधिकार दिए चमत्कारीक विकास गरेर स्थानीय तहले विश्वलाई देखाउने छौ । यतातर्फ सबैको ध्यान जाओस् । धन्यवाद,